alingtt's Reading List - alingtt - Wattpad
alingtt's Reading List
274K 40.8K 43
လကျရှိကာလကနေ ၁၉၅၀ ကိုရောကျသှားတဲ့အခါ .. သငျတို့ရော ခှနျနှောငျးလို စျောဘှားခြောခြောလေးနဲ့တှနေို့ငျမယျထငျလား ...?
44.4K 3K 51
"Why did you 𝘬𝘪𝘴𝘴 me?" I, again throwavery troubled question towards him. ... "I was doing youafavour there." His countenance suddenly changes asaplayful smirk plasters on his face. "You should consider yourself lucky..." "Because many women dreamed to be in your position that day, 𝘙𝘰𝘴𝘢𝘭𝘪𝘦." He smiles...
178K 6.2K 13
10.8K 973 10
My Fussy Boyfriend || Completed
1M 76.9K 44
(Unicode + Zawgyi) (Unicode below) ​တေဇာပိုင်​ × သက်​တန့်​လင်း ​ငယ်​ရွယ်​တဲ့အချိန်​မှာ အချစ်​ကိုစ​တွေ့ခဲ့တယ်​။ အရွယ်​နဲ့မလိုက်​​အောင်​ အချစ်​လမ်းခရီးဟာ မ​ချော​မွေ့ခဲ့ဘူး။ ခက်​ခက်​ခဲခဲနဲ့ အချစ်​တစ်​ခုကို တည်​​ဆောက်​ခဲ့တယ်​။ အချစ်​စစ်​တို့မည်​သည်​ ခရီးလမ်းမ​ဖြောင့်​ဖြူးဆိုသည့်​အတိုင်း ဆူး​ငြောင့်​ခလုတ်​​တွေကို ရင်...
63.3K 4.3K 22
မတူညီတဲ့ ဘဝနှစ်ခုကို ယှဉ်ပြထားတဲ့ လူငယ်အချစ် ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ရေးလက်စမို့ တစ်ပိုင်းချင်းစီ တင်ပေးသွားပါ့မယ် ခမျာ့။
𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑻𝒉𝒆 𝑶𝒏𝒆... 💛
14.5K 742 27
YouAreTheOne ..... မငျးက ကိုယျ့ရဲ့ ထာဝရ တဈဦးတညျးသော ခဈြရသူပါ 💛 စဈ နှဈတှအေမြားကွီးကွာတဲ့အထိ ကိုယျ့တဈယောကျတညျးကိုပဲ ခဈြနမေယျဆိုတာ ယုံကွညျတယျ 💛 မှူး စဈငွိမျးပိုငျ & လရောငျမှူး (Myanmar Bl Fic) YouAreTheOne ..... မင်းက ကိုယ့်ရဲ့ ထာဝရ တစ်ဦးတည်းသော ချစ်ရသူပါ 💛 စစ် နှစ်တွေအများကြီးကြာတဲ့အထိ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းကိ...
57.3K 2.8K 15
​ရေခဲတုံးကြီးForthရဲ့ လက်​သွက်​တာ​တွေ အရို​တွေအဆွိ​တွေကို ခံစားနိုင်​မဲ့Fic​လေးပါ😁 Crd.deebamanja
883K 52.7K 51
မငျးငယျငယျထဲကပွောလာခဲ့သလိုပဲ.... ငါကမငျးတဈယောကျထဲအတှကျပဲ.... အစခေံတဈယောကျဖွဈပါရစေ..... Poster by-Colourful Craft Light
2.6M 282K 55
၁၆၃၅ ဆိုတာ ညောငျရမျးခတျေထဲက မလား။၁၆၃၅ ဆိုပွီး ငါက ဘယျခတျေကို ရောကျနတောတုနျး. #ဤဇာတျလမျးတှငျပါဝငျသောအကွောငျးအရာမြားသညျ သမိုငျးနှငျ့မသကျဆိုငျပါဘဲ စာရေးသူ၏ဖနျတီးစိတျကူးမှု သကျသကျသာ ဖွဈပါသညျ။ Book Cover_ Lucy Xellies